काठमाडाै । राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडारी नेपालकाे तेस्राे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छन ।
वामगठबन्धन कि उम्मेदवार भण्डारी प्रतिष्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी कुमारी लक्ष्मी राईलाई पराजीत गर्दै भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी हुन् । राष्ट्रपति चयनका लागि मंगलवार भएको निर्वाचनमा संघीय संसदका ३ सय २६ र प्रदेश सभाका ५ सय ३६ गरी ८ सय ६२ जनाले मतदान गरेका थिए । जसमध्ये भण्डारीले ३९ हजार २७५ र रार्इले ११ हजार ७३० मतभार प्राप्त गरेकी हुन ।
यस्तै भण्डारीकी प्रतिस्पर्धी कुमारीलक्ष्मी राईले ११ हजार ७ सय ३० मतभार प्राप्त गरिन्। संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यलाई मतदाता बनाएर राष्ट्रपतिको निर्वाचन पहिलो पटक गरिएको हो। यसअघि राष्ट्राध्यक्षको चयन व्यवस्थापिका–संसद् सदस्यले गरेका थिए।
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन २९, २०७४१७:४०
कर्मचारी समायोजन विधेयक पेश गर्न संसद बैठक बस्दै !
चिनी विक्री नहुँदा गोदाममा थन्कियो !
प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्था : सात दिनभित्रै नयाँ मिटर !